warkii.com » Alan Shearer Oo Magacaabay Xiddiga Kaliya Ee Jabin Kara Rikoodhkiisii Gool-dhalinta Premier League
Alan Shearer Oo Magacaabay Xiddiga Kaliya Ee Jabin Kara Rikoodhkiisii Gool-dhalinta Premier League
Alan Shearer ayaa magacaabay xiddiga kaliya ee fursadda u haysta inuu gaadho rikoodhkiisii gool-dhalinta ee horyaalka Premier League oo aanay jirin cid illaa hadda soo qabatay.
Halyeyga hore ee xulka qaranka England ayaa sannado badan oo uu garoomada ku jiray, waxa uu waqti ku qaatay kooxaha Southampton, Blackburn Rovers iyo kooxda uu waayihiisa ugu badan kusoo qaatay ee Newcastle United.
Ilaa hadda ma jiro ciyaartoy gaadhay rikoodhka gool dhalinta Alan Shearer horyaalka Premier League oo ah 260 gool, waxaana ugu soo dhowaa Wayne Rooney oo dhaliyey 208 gool, cimriga ciyaareedna ka hor joogsaday inuu kusii jiro garoomada si uu usoo qabto Alan Shearer.
Laakiin waxa uu Shearer rumaysan yahay in hadda uu soo baxay laacibkii soo qaban lahaa goolashiisa, waana da’yar hadda uun soo baxay oo toban gool oo Premier League ah xili ciyaareedkii ugu horreeyey loo diiwaan-geliyey.
Xiddiga da’da yar ee Manchester United ee Mason Greenwood ayaa xili ciyaareedkan wacdaro ka dhigaya horyaalka Premier League, waxaanu kooxdiisa u dhaliyey goolkii barbarraha ee kulankii West Ham ee sababta u noqday inay kaalinta saddexaad soo galaan.
18 jirkan ayaa guud ahaan xili ciyaareedkan dhaliyey 17 gool oo 10 ka mid ah ay horyaalka Premier League yihiin, waxaanu fursad u haystaa inuu soo qabto rikoodhka Alan Shearer, sida uu halyeygani aaminsan yahay.
Greenwood ayaa u baahan inuu dhaliyo 250 gool oo kale oo horyaalka oo kaliya ku kooban maadaama uu toban gool hore usoo saxeexay, waana haddii uu qaab ciyaareedkan kusii jiro uu dhigi karaa rikoodho badan oo uu ka mid yahay midka uu Alan Shearer sheegay ee goolasha horyaalka.
Isaga oo ka hadlayay barnaamijka BBC Match of the Day, ayaa yidhi: “Waa xiddig sare oo soo baxaya. Waxaan ixtiraamayaa awooddiisa, lugtiisa bidix, lugtiisa midig iyo sida uu kubadda u toogto waqti hore isaga oo aan fursad siinayn goolhayeyaasha.
“Haddii ay tahay dhinaca usoo dhow ee goolka ama dhinaca ka fog, wax walba waxay ku xidhan yihiin awood iyo inaad sida ugu adag ugu dhufato.”
Intaas kaddib waxa uu Alan Shearer, waxa uu sheegay in Mason Greenwood uu jabin doono rikoodhkiisii gool-dhalinta ee Premier League, waxaanu yidhi: “Waxaan ka fikirayaa 12 ama 13 sannadood, waxaynu ka hadli karaynaa rikoodhka gool-dhalinta ee Premier League.
“Waxaan ogahay inay waxyaabo badan ku dhici karayaan xirfadda qofka, laakiin waxaan u malaynayaa inuu sidaa u wanaagsan yahay.”
Alan Shearer waxa uu hore u sheegay in Harry Kane iyo Sergio Aguero ay rikoodhkiisa goolasha soo qaban karayaan, laakiin waxa uu haddana soo xushay Greenwood oo da’yaraantiisa iyo waqtiga badan ee uu haysto ay u suurtogalinayaan inuu goolal badan dhaliyo.